မိန်းကလေးတိုင်း ဓာတ်ပုံထဲမှာစတိုင်ကျ လှပနေစေဖို့ Pose ပေးနည်း ။ - Real Gaming Myanmar
မိန်းကလေးတိုင်း ဓာတ်ပုံထဲမှာစတိုင်ကျ လှပနေစေဖို့ Pose ပေးနည်း ။
တစ်ခါတလေမှာ သာမန်မိန်းကလေးတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်ရော မဂ္ဂဇင်းကာဗာတွေထဲက မိန်းကလေးတွေလို လှပါ့မလားလို့ တွေးထင်ခဲ့ကြမှာပါ။ဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား ဖြစ်ပါစေ ဓာတ်ပုံထဲမှာလှနေဖို့၊ကောက်ကြောင်းပေါ်နေဖို့ ရိုရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိန်းကလေးတိုင်း ဓာတ်ပုံထဲမှာ စတိုင်ကျလှပနေစေဖို့ ဘယ်လိုpose ပေးရမလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ။
ဓာတ်ပုံထဲမှာ သင့်ရဲ့လက်မောင်း သွယ်လျနေသယောင်ဖြစ်ဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ဘေးဘက်မှာ လက်မောင်းကို အတင်းကြီး ကပ်မထားပါနဲ့။ကင်မရာဘက်ကို ဘေးတိုက်လှည့်ပြီး လက်မောင်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြား နေရာခြားစေဖို့ လက်တစ်ဖက်ကို တင်ပေါ်တင်ထားပါ။ဒါဆိုရင်တော့ ကျက်သရေရှိပြီး သွယ်လျတဲ့ လက်မောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။.
2.ပေါင်ကိုကပ်ပြီး ရပ်တာထက် အနည်းငယ်ခွာပြီး ရပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် ညီမျှတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ သွယ်လျတဲ့ခြေတံတွေ အဖြစ် ပုံစံဖော်ပေးမှာပါ။ .
3.မေးနှစ်ထပ် မပေါ်အောင်…ဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားမဆို မေးနှစ်ထပ် ပုံစံဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာ သင့်ရဲ့ခေါင်းအနေအထား မှားယွင်း နေလို့ပါ။တကယ်လို့ သင်ဟာ မေးနှစ်ထပ်ပုံစံပေါ် မနေစေချင်ဘူးဆိုရင် ခေါင်းကို အရှေ့တည့်တည့် မတ်ထားပါ။ .
ဒီလိုကောက်ကြောင်း ပေါ်နေဖို့လည်း နည်းလမ်းသိထားရင် လွယ်ပါတယ်။သင့်ရဲ့တင်ကို ဘေးတိုက် ဖြေးဖြေးချင်းစီ ရွေ့ပြီး လက်ကိုခါးပေါ်မှာ တင်ထားပါ။ဒီရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းလေးက သင့်တင်ကို ကြီးစေပြီး ခါးသွယ်သယောင်ဖြစ်စေမှာပါ။ .
5.နောက်ကျောက အဆီအခေါက်ပြင်ကြီး ပျောက်ဖို့…
သင့်ရဲ့ပုခုံး အနေအထား ပေါ်မူတည်ပြီး သင့်ပုံတစ်ပုံလုံးကို အလှပျက်စေမယ့် ကျောက အဆီအလိပ်လိုက်ကို မြင်သာအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် စိတ်မပူပါနဲ့။ဖျောက်ထားဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။သင့်ရဲ့ပခုံးကို ကင်မရာနဲ့ နီးရာကိုအားစိုက်ပြီး အရှေ့ကို မသိမသာတွန်းပေးပါ။
ထိုင်ခုံမှာ ကျောမှီထိုင်ခြင်းကတော့ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံ တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် မေ့နေကြတာ တစ်ခုက ပုံစံကျအောင်ထိုင်မှသာ လက်မောင်းခြေထောက်တွေကို သွယ်တန်းရှည်လျား နေစေမှာပါ။
7.သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို အရှေ့အနည်းငယ် ကိုင်းပေးပါ။
အပေါ်ပိုင်းပုံ ရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ အနောက်ကိုမဆွဲပါနဲ့။အဲလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ပုခုံးကို ပိုကျယ်စေတဲ့အပြင် မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်စေပြီး လည်ပင်းကိုတိုသယောင် ဖြစ်စေပါတယ်။ခေါင်းကို အနည်းငယ်စောင်းပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို ကင်မရာဘက်ကို ကိုင်းပေးခြင်းအားဖြင့် အသွင်ပြောင်း စေမှာပါ။ .
8.သင်ရပ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ရလို့ ဘာposeပေးရမှန်းမသိ ဖြစ်နေရင်တော့ တစ်ဝက်လှည့် အနေအထားနဲ့ နောက်ခြေနဲ့အလေးချိန်ကို မျှထမ်းပါ။ပခုံးတွေကို ဆန့်ပေးပါ။ဒီလိုposeမျိုးမှာတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖုံးကွယ်နေဖို့ထက် ဘယ်လိုနေနေ လှပါတယ်ဆိုတာကို အထူးအသားပေး ဖော်ပြရမယ့် အခြေအနေဖြစ်သွားပါပြီ။ .
9.ဓာတ်ပုံကို နောက်ဘက်က ရိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ။
သင့်ရဲ့ကောက်ကြောင်း ပေါ်ဖို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံးထောင့်အနေအထားကတော့ အနောက်ဘက်က ဓာတ်ပုံရိုက်တာပါ။ကင်မရာဘက်ကို တစ်ဝက်လှည့်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ကို ခါးပေါ်တင်ပါ။ခေါင်းကိုအနည်းငယ်လှည့်ပါ။
10.ခြေထောက်ကို ကန့်လန့်ဖြတ်ထားပါ။ .
သင်ဟာ ကောက်ကြောင်းပေါ်တဲ့ ကိုယ်နေ ဟန်ထားဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲတယ်လို့ ခုချိန်ထိ ယူဆနေသေးတယ် ဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံးနည်းလမ်းလေးတစ်ခု ထပ်မံဖော်ပြ ပေးချင်ပါတယ်။အရှေ့ကို ခြေတစ်လှမ်း တိုးတော့မယ့်ဟန်နဲ့ ကန့်လန့်ဖြတ် အနေအထား ထားပါ။ခါးပေါ်မှာ လက်တစ်ဖက်ကို တင်ထားပါ။ .
မိနျးကလေးတိုငျး ဓာတျပုံထဲမှာစတိုငျကြ လှပနစေဖေို့ Pose ပေးနညျး ။
တဈခါတလမှော သာမနျမိနျးကလေးတှေ ဓာတျပုံရိုကျရငျရော မဂ်ဂဇငျးကာဗာတှထေဲက မိနျးကလေးတှလေို လှပါ့မလားလို့ တှေးထငျခဲ့ကွမှာပါ။ဘယျလိုခန်ဓာကိုယျ အခြိုးအစား ဖွဈပါစေ ဓာတျပုံထဲမှာလှနဖေို့၊ကောကျကွောငျးပျေါနဖေို့ ရိုရှငျးတဲ့ နညျးလမျးမြားစှာ ရှိပါတယျ။ဒီတဈခါမှာတော့ မိနျးကလေးတိုငျး ဓာတျပုံထဲမှာ စတိုငျကလြှပနစေဖေို့ ဘယျလိုpose ပေးရမလဲဆိုတာကို ဖျောပွပေးသှားမှာပါ။ ။
ဓာတျပုံထဲမှာ သငျ့ရဲ့လကျမောငျး သှယျလနြသေယောငျဖွဈဖို့ ခန်ဓာကိုယျဘေးဘကျမှာ လကျမောငျးကို အတငျးကွီး ကပျမထားပါနဲ့။ကငျမရာဘကျကို ဘေးတိုကျလှညျ့ပွီး လကျမောငျးနဲ့ ခန်ဓာကိုယျကွား နရောခွားစဖေို့ လကျတဈဖကျကို တငျပျေါတငျထားပါ။ဒါဆိုရငျတော့ ကကျြသရရှေိပွီး သှယျလတြဲ့ လကျမောငျးကို ပိုငျဆိုငျရမှာပါ။.
2.ပေါငျကိုကပျပွီး ရပျတာထကျ အနညျးငယျခှာပွီး ရပျပေးခွငျးအားဖွငျ့ ညီမြှတဲ့ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားနဲ့ သှယျလတြဲ့ခွတေံတှေ အဖွဈ ပုံစံဖျောပေးမှာပါ။ .
3.မေးနှဈထပျ မပျေါအောငျ…ဘယျလိုခန်ဓာကိုယျ အခြိုးအစားမဆို မေးနှဈထပျ ပုံစံဖွဈနနေိုငျပါတယျ။ဒါဟာ သငျ့ရဲ့ခေါငျးအနအေထား မှားယှငျး နလေို့ပါ။တကယျလို့ သငျဟာ မေးနှဈထပျပုံစံပျေါ မနစေခေငျြဘူးဆိုရငျ ခေါငျးကို အရှတေ့ညျ့တညျ့ မတျထားပါ။ .
ဒီလိုကောကျကွောငျး ပျေါနဖေို့လညျး နညျးလမျးသိထားရငျ လှယျပါတယျ။သငျ့ရဲ့တငျကို ဘေးတိုကျ ဖွေးဖွေးခငျြးစီ ရှပွေီ့း လကျကိုခါးပျေါမှာ တငျထားပါ။ဒီရိုးရှငျးတဲ့ နညျးလမျးလေးက သငျ့တငျကို ကွီးစပွေီး ခါးသှယျသယောငျဖွဈစမှောပါ။ .
5.နောကျကြောက အဆီအခေါကျပွငျကွီး ပြောကျဖို့…
သငျ့ရဲ့ပုခုံး အနအေထား ပျေါမူတညျပွီး သငျ့ပုံတဈပုံလုံးကို အလှပကျြစမေယျ့ ကြောက အဆီအလိပျလိုကျကို မွငျသာအောငျ ဖနျတီးပေးနိုငျပါတယျ။ဒါပမေယျ့ စိတျမပူပါနဲ့။ဖြောကျထားဖို့ လှယျကူပါတယျ။သငျ့ရဲ့ပခုံးကို ကငျမရာနဲ့ နီးရာကိုအားစိုကျပွီး အရှကေို့ မသိမသာတှနျးပေးပါ။
ထိုငျခုံမှာ ကြောမှီထိုငျခွငျးကတော့ သငျ့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျပုံစံ တဈခုလုံးကို ပွောငျးပေးနိုငျပါတယျ။ဒါပမေယျ့ မနေ့ကွေတာ တဈခုက ပုံစံကအြောငျထိုငျမှသာ လကျမောငျးခွထေောကျတှကေို သှယျတနျးရှညျလြား နစေမှောပါ။
7.သငျ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျကို အရှအေ့နညျးငယျ ကိုငျးပေးပါ။
အပျေါပိုငျးပုံ ရိုကျတဲ့အခါမြိုးမှာ အနောကျကိုမဆှဲပါနဲ့။အဲလိုလုပျခွငျးအားဖွငျ့ သငျ့ပုခုံးကို ပိုကယျြစတေဲ့အပွငျ မေးနှဈထပျဖွဈစပွေီး လညျပငျးကိုတိုသယောငျ ဖွဈစပေါတယျ။ခေါငျးကို အနညျးငယျစောငျးပွီး ခန်ဓာကိုယျကို ကငျမရာဘကျကို ကိုငျးပေးခွငျးအားဖွငျ့ အသှငျပွောငျး စမှောပါ။ .
8.သငျရပျပွီး ဓာတျပုံရိုကျရလို့ ဘာposeပေးရမှနျးမသိ ဖွဈနရေငျတော့ တဈဝကျလှညျ့ အနအေထားနဲ့ နောကျခွနေဲ့အလေးခြိနျကို မြှထမျးပါ။ပခုံးတှကေို ဆနျ့ပေးပါ။ဒီလိုposeမြိုးမှာတော့ ခန်ဓာကိုယျကို ဖုံးကှယျနဖေို့ထကျ ဘယျလိုနနေေ လှပါတယျဆိုတာကို အထူးအသားပေး ဖျောပွရမယျ့ အခွအေနဖွေဈသှားပါပွီ။ .
9.ဓာတျပုံကို နောကျဘကျက ရိုကျတာအကောငျးဆုံးပါ။
သငျ့ရဲ့ကောကျကွောငျး ပျေါဖို့အတှကျ အသငျ့တျောဆုံးထောငျ့အနအေထားကတော့ အနောကျဘကျက ဓာတျပုံရိုကျတာပါ။ကငျမရာဘကျကို တဈဝကျလှညျ့ပွီး လကျနှဈဖကျကို ခါးပျေါတငျပါ။ခေါငျးကိုအနညျးငယျလှညျ့ပါ။
10.ခွထေောကျကို ကနျ့လနျ့ဖွတျထားပါ။ .
သငျဟာ ကောကျကွောငျးပျေါတဲ့ ကိုယျနေ ဟနျထားဖွဈဖို့ ခကျခဲတယျလို့ ခုခြိနျထိ ယူဆနသေေးတယျ ဆိုရငျတော့ နောကျဆုံးနညျးလမျးလေးတဈခု ထပျမံဖျောပွ ပေးခငျြပါတယျ။အရှကေို့ ခွတေဈလှမျး တိုးတော့မယျ့ဟနျနဲ့ ကနျ့လနျ့ဖွတျ အနအေထား ထားပါ။ခါးပျေါမှာ လကျတဈဖကျကို တငျထားပါ။ .
Previous: ကားရိုက်မရှိလို့ မုန့်ဟင်းခါးရောင်းနေရတဲ့ ရဲလေးမ ။ ။
Next: အ ပုပ် နံ့ ဆိုး ဆိုး ဝါး ဝါး ရ ရှိ သ ဖြင့် စစ် ဆေး ရာ အ ခန်း တွင်း ဂန့် နေ သည့် အ မျိုး သား တစ် ဦး ၏ …